Osaziwayo banxusa ukuphepha nokuthandana ngala maholidi
Nokubongwa Phenyane | December 24, 2021
OSAZIWAYO bakuleli sebenxuse ukuthi imindeni ikhombisane uthando kakhulu kulesi sikhathi sikaKhisimusi njengoba lolu suku lungasafani nakuqala.
Njengoba kusasa kuwuKhisimusi, osaziwayo bakuleli bacele imindeni ukuthi ikhombisane nakakhulu uthando njengoba eminingi ihlaselwe yigciwane leCovid-19, kwashona amalungu ayo.
Isolezwe likhulume nosaziwayo abahlukene ukuzwa ukuthi ngalolu suku bazobe benzani.
Umlingisi oqale ukuzakhela igama emdlalweni Uzalo manje osebonakala kwiDurban Gen, uDudu Ngcobo, olingisa indawo kaDr Qwabe, uthe ngalolu suku uqoqa umndeni wakhe babe ndawonye njengoba abanye behlala eThekwini, abanye beseGoli.
“Ngizalwa eLamontville ngakho ngalesi sikhathi njengoba sengaba nomuzi eGoli, ngiyabathatha siye emzini wami. Ngivuka ekuseni ngilungise isidlo esiconsisa amathe sasekuseni bese siqala silungiselela ukudla kwasemini. Kimina wusuku olubaluleke kakhulu njengoba sisuke sihlangene sonke. Ngibafisela konke okuhle abantu, sibi kakhulu isimo esibhekene naso manje kodwa uma besahlangana bephelele noma bengasaphelele, abawujabulele lo mzuzu ngoba ubalulekile,” kuchaza uDudu.
UCarol Ofori, ongumsakazi esiteshini esizinze eThekwini, i-East Coast Radio, uthe ngalolu suku uzobe eseGoli njengoba belindele ilungu elisha emndenini wabo.
“Ngizokujabulela ukuba nomndeni wami njengoba singasajwayele nje ukuba ndawonye, mina ngiseKZN ngenxa yomsebenzi. Wusuku lolu okumele siluchithe nabantu esibathandayo. Sizoba nesidlo esikhethekile sasemini esengisihlelile. Unyaka nonyaka sinomkhuba wokuvuka ekuseni sivule izipho zethu esinikezana zona ngaphansi kwesihlahla, njengoba njalo ngoDisemba sisivula. Emuva kwalokho siba nomkhuleko sibonge impilo bese siyazijabulisa ngezicoficofi,” kusho uCarol.
UDJ Sabby uthe uyaluthanda usuku lukaKhisimusi njengoba basuke bekhombisana uthando ngalesi sikhathi.
“Mina nje nomndeni wami sisuke sikhombisana uthando ngalolo suku. Siyaludinga usuku olufana nalolu onyakeni ukuze sikhumbuzane ukuthi asikho sodwa, uma nje unomndeni chitha isikhathi nabo ngoKhisimusi. Nami ngihlala nabo nje. Ngilubheke ngabomvu lolu suku, siyadla, siphuze iziphuzo ezihlukene. Mina ngalolu suku ngithi asijabuleni, okunye sesokubona uma kuqala unyaka,” kusho uDJ Sabby.
Umlingisi emdlalweni, Umkhokha, uHope Mbhele, uthe yize ezobe ezoqala emsebenzini ekuseni ngalolu suku kodwa uzophuma aqonde ekhaya kubo eMthwalume.
“Ngizoqala ngenze uhlelo emsakazweni, Igagasi FM, bese ngiya ekhaya. Angiyena-ke mina umuntu okhonze ibhodwe, konke ngikushiyela kumama bese mina ngisiza uma sesenza i-dessert. Cha, yona ngiyathanda-ke ukuyenza. Uma sengiqedile ukusiza ekhaya, ngike ngihambele imindeni lapho kunezingane khona kuphela, abazali abangasekho, ngifike ngibaphe izimpahla. Abanye ngisuke ngihambe nabo sayozithenga, ngiyakholelwa ekutheni kumele ngalolu suku siphe ukuze imindeni ijabule. Ngiyathemba nabo bonke abalahlekelwe yizihlobo zabo ngalesi sikhathi bazolujabulela lolu suku nalabo abakhona kodwa engikunxusa kakhulu ukuthi abantu baphephe ngazo zonke izindlela,” kusho uHope.